Akụkọ - Kedu ihe e ji mara ndị na-ekpo ọkụ gas mmiri oyi efu?
Igwe ọkụ mmiri oyi efu agaghị emepụta mmiri oyi mgbe ejiri ya.Nke mbụ, maka ndị na-ekpo ọkụ mmiri nkịtị, e nwere ebe dị anya n'etiti ọkpọkọ na mmiri ọkụ, a ga-enwekwa mmiri oyi fọdụrụ na pipeline.Oge ọ bụla ị na-eji mmiri ọkụ, ị ga-ebu ụzọ chere ka mmiri oyi ga-apụ.
N'ịchọ ebe a na-egbu mgbu, ihe na-ekpo ọkụ mmiri oyi efu na-eji mgbapụta na-ekesa n'ime, nke nwere ike ịgbanye mmiri oyi nke fọdụrụ na ọkpọkọ mmiri n'ime mmiri ọkụ iji kpoo ya ma kesaa ya na pipeline.
Ọ na-ewe oge ụfọdụ maka ikpo ọkụ mmiri gas nkịtị ka ọ na-ekpo ọkụ ruo n'ogo nke edoziri.N'ikwu okwu n'ozuzu, ọ na-ewe ma ọ dịkarịa ala 30 sekọnd iji mepụta mmiri ọkụ, ebe efu mmiri oyi na-ekpo ọkụ na-ewekarị 5-10 sekọnd, na mmepụta mmiri ọkụ na-ebuwanyekwa nke ọma.
N'ịhụ nke a, ụfọdụ ndị nwere ike ịsị na ọbụna oge dị iche iche nke iri nke sekọnd yiri ka ọ bụ ihe ọ bụla, ma n'ihe gbasara ịsa ahụ, oge dị iche iche nke iri iri nke sekọnd nwere ike iweta ahụmahụ dị jụụ karị.
Enwere ihe ọ bụla a chọrọ maka ntinye nke ọkụ mmiri oyi efu?
Mgbe a bịara n'itinye ihe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nsogbu nke ịwụnye ọkpọkọ nlọghachi dị mkpa.Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-emekarị n'ahịa na-achọ ka ọ bụrụ ọkpọkọ nlọghachi n'oge echichi.Enweghị ọkpọkọ a, igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ka ga-emepụta mmiri oyi!Ndị na-ekpo ọkụ mmiri nkịtị n'ozuzu ha kwesịrị ibu ụzọ tinye ọkpọkọ mmiri ọkụ na ọkpọkọ mmiri oyi.
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ efu efu kwesịrị ịwụnye "paịpụ nloghachi" na ndabere a iji zute ezigbo njikwa okpomọkụ mmiri.
Dị ka anyị niile maara, mgbe ị na-eji ọkụ ọkụ gas, ị kwesịrị ichere ka mmiri oyi dị na pipeline na-agbapụta tupu mmiri ọkụ ahụ pụta.Nke a bụ isi ihe mgbu n'ọtụtụ ezinụlọ na-eji ọkụ ọkụ, na efu mmiri oyi na-edozi ebe mgbu a nke ọma.
N'ileghachi anya n'elu ikpo okwu e-azụmahịa, anyị nwekwara ike ịhụ na ọnụ ahịa ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ isi ihe dị ka puku yuan abụọ ma ọ bụ atọ, nke na-adịghị iche na ọnụahịa nke ndị na-ekpo ọkụ mmiri nkịtị.Nke a bụ ezigbo ihe mere a ga-eji tụlee ya.
Otú ọ dị, ebe ọ bụ na igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-eji mgbapụta na-ekesa, ọ ga-abawanye ụgwọ ụfọdụ iji jiri ya mee ihe.Ị nwekwara ike ịhọrọ igwe ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-arụ ọrụ nhazi oge.